Daawo Sawirada: Shirkad soo saareysa Laptop noociisa aan hore loogu arag Dunida – Tusmoonline.com
Daawo Sawirada: Shirkad soo saareysa Laptop noociisa aan hore loogu arag Dunida
Wararka	January 6, 2017	110	Like
Shirkad lagu magacaabo Razer oo sameysa Cumbuyuutarada Game-ka ayaa shaaca ka qaaday in ay dhawaan soo saareyso Laptob cusub oo nuuciisa aan horey dunida loogu arag, waxa uuna Laptobkan loo sameenayaa sadex shaashad.
Xarunta ay shirakada ku leedahay magaalada Las Vegas, ee dalka Mareykanka ayaa lagu daah furay Laptobkan cusub ee shirkadu soo saareyso, waxa uuna Cumbuuterkan noqonayaa nuuc cusub oo kusoo kordha caalamka.
Laptobkan cusub ee soo saareyso Shirkada Razer ayaa leh sadex Shaashad , waxaana labo kamid ah shaashadahaasi ay kuyaalaan geesaha halka kan kalana uu dhaxda ku yaalo, waxa uuna Laptobkan wax usoo bandhigayaa qaab otomaatim ah.
Shirkada Razer ayaa lagu amaanay laptobkan cusub ee soo kordhisay, waxaana dhamaan seddaxda shaashad midkiiba cabirkeeda lagu qiyaasaa 17 in (43cm), waxaana laptobkan uu noqonaya mid soo jiidasho leh.
Afhayeen u hadlay Shirkada Razer ee soo saareysa Laptobkan cusub ayaa sheegay in howl badan qabteen ayna soo kordhinayaan nidaam cusub, hasa ahaatee waxa uu ka gaabdsaday in uu sheego xiliga uu diyaarka noqonayo Laptobkan suuqyadana lasoo galinayo.
Shirkada ayaa tilmaantay in Sababta ay laptop-kan u sameeyeen ay tahay h in dadka game-ka ciyaara iyo kuwa muuqaallada jarjara ay awood u yeeshaan inay si waasac ah u qabtaan waxa ay ka shaqeynaayaan.